Aqalka Wakiilada Mareykanka oo meel mariyay sharci taageeraya muslimiinta Shiinaha – Radio Muqdisho
Aqalka Wakiilada Mareykanka oo meel mariyay sharci taageeraya muslimiinta Shiinaha
in Caalamka, Wararka
Xubnaha Aqalka Wakiilada dalka Mareykanka ayaa meel mariyay shaci ka hortagaya waxa loogu yeeray xarig aan sabab lahayn, jirdil, iyo dhibaateyn xukumadda Shiinuhu ku heyso muslimiinta Uighur ee ku nool gobolka Shinwaa.
Xubnaha Aqalka ayaa ku baaqay in bartilmaameedku uu noqdo cunaqabateyn la saaro xubno ka mid ah madaxda dowladda Shiinaha iyo Chen Quanguo oo ah xoghayaha xisbiga Shuuciga ismaamulka gobolka Xinjiang.
Sharciga ay meel mariyeen xubnaha Aqalka Wakiilad ayaa waxa uu u baahan yahay in ay ansixiyaan xubnaha Aqalka Senetka iyo Madaxweyne Trump.
Wasiirka Arimaha Dibadda ee dalka Shiinaha ayaa si caro leh uga jawaabay sharcigasi ay soo gudbiyeen xubnaha Aqalka Wakiilada,wuxuuna tallaabadaasi ku macneeya mid xaasidnimo ah.
Wasaaradda Dastuurka oo kullan la yeelatay maamulka gobolka Banaadir “Sawirro”
Safiirka Soomaaliya ee K/Sudaan “Madaxda dalkan waxaan kala hadlay sidii ganacsatada Soomaaliyeed badqab u heli la-haayeen
Safiirka Soomaaliya ee K/Sudaan "Madaxda dalkan waxaan kala hadlay sidii ganacsatada Soomaaliyeed badqab u heli la-haayeen